तिथि मेरो पत्रु »3तपाईं उहाँलाई प्रतिबद्धता चाहनुहुन्छ भने तपाईंले बुझेको हुनुपर्छ कुराहरू
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: अक्टोबर. 28 2020 |2मिनेट पढ्न
आज मानिसहरूले प्रतिबद्धता बलियो डर देखाउने यो सम्बन्ध आउँदा धेरै महिलाहरु भन्दै मा सहमत हुनेछन्. तपाईं नै झुकाव भन्नेछु यो मनोवैज्ञानिक विपरीत सेक्स संग याद छ र तपाईं यस डर गरेको जरा बारेमा सबै बताउनेछ – चिन्ता आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाउन, तिनीहरूको गोपनीयता र स्वतन्त्रता. आफ्नो साथी प्रतिबद्ध तयार छैन भन्ने छाप अन्तर्गत तपाईं हुनुहुन्छ? के तपाईं आफ्नो मानिसको मनमा प्रमुख छ कि र आफ्नो कार्यले सम्बन्ध मा रहन वा अर्को स्तर गर्न यो लिने आफ्नो निर्णय मा एक ठूलो प्रभाव छ भन्ने थाह हुनुपर्छ. प्रतिबद्धता एक मानिस मा कुरा गर्न सकिन्छ कुरा होइन, तपाईं पहिले देखि नै ठेगाना. तपाईं सही समय लेने भने, तपाईं उहाँलाई प्रतिबद्ध गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ सबै गरिदिने विशेष भावना उहाँलाई तपाईं एक हो बुझ्न बाहिर ल्याउन छ.
उहाँलाई विशेष महसुस बनाउन
एक काम वर्णन भरिन भने कुनै एक जांच भइरहेको भावना रुचि. आफ्नो मानिस चिन्न भन्दा तिनलाई सही छ सुनिश्चित गर्न एक सूचीबारे माध्यम जाने बनाउने समय लिनुहोस्. डेटिङ गर्दा, धेरै आधुनिक महिलाहरु पनि उहाँ साँच्चै हुनुहुन्छ चिन्नुको अघि एक मानिस देखि उनि के चाहते प्रकट बानी छ. किनभने हाम्रो व्यस्त जीवनमा को यो छ? शायद, तर तपाईं एक पति भेट्टाउने सामाजिक दबाव आफ्नो आनन्दको बाटो मा खडा गरौं हुँदैन. आफ्नो मान्छे उहाँले सट्टा एक रिक्ति भरने सन्देश प्रसारण को छ के को लागि विशेष महसुस गर्नुहोस्. यो सबै भन्दा ठूलो को हो; छैन भने यो सम्बन्ध र प्रतिबद्धता गर्न आउँदा सबै भन्दा ठूलो डर मानिसहरू छ. एक मानिस ठेगाना हुन्छ जब तपाईं नितान्त पति लागि देख रहे, उहाँले उडान हुनेछ. एक सम्बन्धमा तपाईंको प्रारम्भिक अन्तरक्रिया सबै मानिस चिन्नुको बारेमा हुनुपर्दछ. यो उहाँको सुरक्षित महसुस.
उहाँलाई पनि दबाउ महसुस नदेऊ
उच्च संभावना छ कि तपाईं तुरन्त वरपरका सबै आफ्नो जीवन स्विच भने आफ्नो मान्छे दबाउ महसुस हुनेछ छन्. कुराहरू बिस्तारै हुन, हामी पहिलो नजर मा प्रेम कुरा पनि जब. यसबाहेक, प्रतिबद्धता भित्रबाट आएको छ र कुनै मा बाध्य हुन सक्दैन. उहाँलाई बेवास्ता बिना, आफ्नो जीवन बिताउन! उहाँलाई भेट्न समय बनाउन, तर तपाईं परिवार र साथीहरू राम्रो तरिकाले भुल्ने छैन. अर्कोतर्फ, उहाँलाई हरेक पाँच मिनेट छोड्ने खतरा छैन. आनन्दित र विश्वसनीय हुनुहोस्! उहाँलाई तपाईं भाग्यशाली महसुस बनाउन र लामो चाँडै विकास हुनेछ प्रतिबद्धता को भावना को लागि पर्खेको.
उहाँसँग सकारात्मक क्षण सिर्जना
एक लामो स्थायी सम्बन्ध प्रत्येक अन्य र तपाईं उसलाई जम्मा छन् सम्झनाहरु लागि आफ्नो प्रेम छ कि एक बलियो जग बिना निर्माण हुन सक्दैन. तपाईं समय पाउन सुनिश्चित र तपाईं उसलाई अचम्म आफ्नो रचनात्मकता प्रयोग र सम्झनाहरु को सही तरिका निर्माण गर्न. आफ्नो सम्बन्ध भविष्यको बारेमा कुरा गर्न भनेर चाहनालाई, कुनै कुरा तपाईं विषय मा obsess कति. मजा र चंचल हुनुहोस्! उहाँले हुनुको रुचि कसैले हुनुहोस्! सकारात्मक क्षण मानिसको हृदय गर्न प्रमुख हो.